०.३० % ले घट्यो नेप्से, ७ अर्ब ८९ करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री
साउन ५, काठमाडौं । साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलवार नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा शून्य दशमलव ३० प्रतिशत अर्थात् ९ दशमलव शून्य १ अंकले घटेको छ ।
यो दिन नेप्से परिसूचक २ हजार ९८५ दशमलव ५७ कायम भएको हो । यसदिन २१९ ओटा कम्पनीको ३ करोड १६ लाख ८ हजार १९३ कित्ता शेयरको ८४ हजार ४६८ पटकमा रू.७ अर्ब ८९ करोड ७५ लाख ९४ हजार २६९ दशमलव ०५ बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
यसदिन कारोबारमा आएका २१९ ओटा कम्पनीमध्ये दुई ओटा म्युचअल फण्डको इकाईमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । लक्ष्मी उन्नती कोष र लक्ष्मी इक्विटी फण्डको इकाई मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो । लक्ष्मी उन्नती कोषले इकाईधनीहरुलाई २५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेसँगै लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको हो ।
यसैदिन बरुण हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ९ दशमलव ३९ प्रतिशत र माउण्टेन हाइड्रो नेपालको शेयर मूल्य ९ दशमलव २८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
शेयरमूल्य घट्नेमा आइसीएफसी फाइनान्सको ऋणपत्र मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ६ दशमलव १७ प्रतिशतले घटेको छ । कम्पनीको ऋणपत्र मूल्य प्रतिकित्ता रू. १ हजार १८६ कायम भएको छ । योदिन सर्वाधिक कारोबार भने अरुण काबेली पावरको रू. ३८ करोड ७८ लाख २०९ हजार बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
दोस्रोमा अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको रू. २६ करोड ९८ लाख ४१ हजार बराबरको शेयर खरीद वक्री भएको छ । नेप्सेमा मंगलावर भने सामान्य करेक्सन आएको छ । आइतवार ९७ अंकले बजार वृद्धि भएको थियो ।
सोमवार पनि १३ दशमलव ९७ अंकले बजार बढेको थियो । बजार बढेसँगै यसदिनको बजारमा विक्रेता हावी भएको देखिएको छ । बुलिस ट्रेण्डमा रहेको बजार समान्य करेक्सन हुँदै अगाडि बढ्दा थप बलियो हुने बजार विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
सूचीकृत कम्पनीहरुले गत आवको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेपछि कम्पनीलेहरुले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पनि गर्नेछन् । जसका कारण पनि बजार अझै माथि जाने संकेत गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा विश्व पौडेल नियुक्त[२०७८ सावन, १२]
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको चौथो त्रैमासिक वित्तीय अवस्था [ आधारभुत तथा प्राविधिक विश्लेषण ][२०७८ सावन, १२]
थप ३८९९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, २० जनाको मृत्यु[२०७८ सावन, १२]
२९.२४ अंकले बढ्यो शेयर बजार, १५ अर्बभन्दा बढीको कारोबार[२०७८ सावन, १२]
बजार बढेसँगै ७ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्यमा सर्किट[२०७८ सावन, १२]
युनाइटेड इदि मर्दी आरबि हाइड्रोपावरको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट, प्रतिकित्ता मूल्य ५८९.६० पुग्यो[२०७८ सावन, १२]
एनआईसी एशिया बैंकको सर्वाधिक २६ करोड ८० लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री [२०७८ सावन, १२]
हिमालयन उर्जा विकास कम्पनीको शेयरमूल्य ९.९९ % वृद्धि, प्रतिकित्ता रू.५२३ पुग्यो[२०७८ सावन, १२]
आधारभूत अस्पतालका लागि डीपीआर पेश गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्‍यो आग्रह
तस्वीर : प्रमाणिकरण तथा नो अब्जेक्सन लेटर लिन बसेका बिद्यार्थीहरु
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा विश्व पौडेल नियुक्त
खोटाङमा ९५% रोपाइँ सम्पन्न
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको चौथो त्रैमासिक वित्तीय अवस्था [ आधारभुत तथा प्राविधिक विश्लेषण ]